तिघ्रामा गोली हानी तीन लाख लुटियो - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home प्रदेश तिघ्रामा गोली हानी तीन लाख लुटियो
सर्लाही । सर्लाहीमा अज्ञात व्यक्तिले तिघ्रामा गोली हानेर तीन लाख रुपैयाँ लुटिएको छ । सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका वडा नं. ३ बिनगरा बस्ने ४० वर्षिय सुरेन्द्र चौधरीले साथमा रहेको नगद ३ लाख रुपैयाँ दुई जना अज्ञात व्यक्तिले लुटनुको साथै तिघ्रामा गोलि हानेर भागेको बताए ।
चौधरी आफनो घरबाट ३ लाख रूपैया लिएर चक्रघटा गाउँपालिका स्थित एनआईसी बैकमा जाँदै थिए । दाई उपेन्द्र चौधरीलाई पैसा डिपोजिट गर्न जाने क्रममा चक्रघट्टा गाउँपालिका वडा नं. ५ पर्ने मदनपुर चोकबाट अलि अगाडि रहेको बाटोमा पुगेपछि लुटिएको बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले गोली हानेर तीन लाख लुटिएको जनाएको छ ।
चौधरीले २५ वर्षिय प्रमोद कुमार यादवको रकम लुटने व्यक्तिहरु सँग साठगाँठ रहेको भन्दै आफुलाई लुटाएको आरोप लगाएका छन् ।
‘मलाई बाटोमा यादवले पटक पटक ओभर टेक गरेका थिए यादवले इसारा गरेपछि सुनसान ठाउँमा बाटो छेकेर मास्क लगाएका दुई जनाले रकम लुटे र तिघ्रामा गोली हानेँ ।’ चौधरीले भने ।
यो पनि पढ्नुहोस सामाजिक सेवा दिवस मानाइयो
घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा पक्राउ परेका यादवले आफु निर्दोष रहेको बताएका छन् । चौधरीसंगै आफनो पनि ४० हजार नगद लुटिएको यादबले बताए ।
पक्राउ परेका यादव एक महिना पहिले मोटरसाइकल चोरी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । त्यस्तै पिडित चौधरीको तिघ्रामा गोलि लागि हाडमा गएर अडिएकोले मलंगवा अस्पतालमा प्राथमिक उपचार पछि थप उपचारको लागि काठमाडौं रेफर गरिएको मलंगवा अस्पतालले जानकारी दिएको छ ।
घटना संलग्न रहेको आशंकामा यादवलाई पक्राउ गरी अन्य अनुसन्धान पक्रिया अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी निरीक्षक राजु प्रसाद कुर्मिले जानकारी दिए ।
रमेश तिमलसिना - September 26, 2020
भर्खरै टेनिस रोका - September 26, 2020
प्रदेश सुदीप कोइराला - February 7, 2020
मोरङ । प्रदेश १ को प्रदेश सभाको पाँचौं तथा हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश...
Not-to-be-missed एजेन्सी - September 23, 2020
Breaking News राजधानी समाचारदाता - May 15, 2020
यो पनि पढ्नुहोस होम आइसोलेसनमा बसेका जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीको कोरोनाबाट मृत्यु